eHimalayatimes | अन्तर्वार्ता | ‘म नगरवासीको सिपाही हुँ’: शिवसताक्षी नगर प्रमुख शेर्मा
20th June | 2018 | Wednesday | 2:57:05 PM
‘म नगरवासीको सिपाही हुँ’: शिवसताक्षी नगर प्रमुख शेर्मा
POSTED ON : Friday, 21 July, 2017 (6:56:22 PM)
स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचनमा झापा शिवसताक्षी नगरपालिकाबाट मेयर पदमा विजयी भएका चन्द्रकुमार शेर्मा विगत लामो समय देखि अनवरत रुपमा जनताको सेवामा समय विताएका ब्यक्तिका रुपमा परिचित छन् ।
स्थानीय स्तरमा लोकप्रिय मानिएका नव निर्वाचित नगर प्रमुख शेर्मा शालिन व्यक्तित्वका रुपमा चिनिन्छन् । साधारण जीवन शैली उनको लोकप्रियता हो । उनि नेकपा एमालेमा आवद्ध भएको करिव ४० बर्ष पुगिसकेको बताउ छन् । झापामा कम्युनिस्ट आन्दोलनकै समयमा साविक धरमपुरको डुँडामारीमा स्थायी बशोवास गरेका शेर्मा पार्टी सँग नजिक रहेर जनताको लागि समय खर्चिएकै कारण आज पार्टीले मेयर जस्तो गरिमामय पदमा टिकट दिएको उनको विश्वास छ ।
झापाका साविकका चार गाविस धरमपुर, सतासी, शिवगञ्ज र पाँचगाछी मिलेर बनेको शिवसताक्षी नगरपालिकामा बशोवास गर्ने सम्पूर्ण दल आवद्ध जनता, भिन्न भिन्न विचार बोकेका स्थानीय जनताको भावना समेटेर विकासको कामलाई अघि बढाउने मुख्य उद्धेश्य लिएको उनले बताए । शिवसताक्षीका नवनिर्वाचित प्रमुख चन्द्रकुमार शेर्मासँग हिमालय टाइम्सका लागि मुरारी ढुंगेलले गरेको कुराकानीको संपादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नगर प्रमुखमा विजयी हुनु भएको छ ? जिम्मेबारी बढेसँगै कस्तो अनुभव भई रहेको छ ?
प्रथमत मलाई निर्वाचित गराउनु हुने सम्पूर्ण मतदातामा धन्यवाद दिन चाहान्छु । त्यसैगरि मलाई भोट नदिइ अरु कुनै उम्मेदवारलाई भोट दिने मतदाताहरुलाई पनि विगत जे जस्तो भएपनि अव म समान रुपमा, सबैलाई समेटेर न्यायोचित विकास गर्ने मेरो प्रयत्न रहन्छ । म अब यो–त्यो दल मात्रको प्रतिनिधी नभएर सम्पूर्ण शिवसताक्षी नगरको प्रमुख हुँ, नगरवासीको सिपाही हुँ । मेरो पार्टीको विचारलाई मध्यनजर राख्दै स्थानीय सम्पूर्ण जनताको उन्नतिमा मेरो भावी दिन अघि बढाउने छु । त्यहि प्रवृतिको व्यवहार मबाट हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहान्छु । होला चुनावी प्रतिस्पर्धामा दलगत रुपमा उम्मेदवार बनियो होला तर अब म कुनै दलको भन्दापनि सम्पूर्ण नगरवासीको प्रतिनिधी भएर आफ्ना जिम्मेवारीलाई वहन गर्न संकल्प लिएको छु । दल भन्दा माथि उठेर विकास निर्माण, स्थानीय समस्यालाई म लगायत अन्य प्रतिनिधी र आवस्यकता अनुसार स्थानीय बुद्धिजिवी, दलहरुको सहकार्यमा अघि बढ्ने छु । सम्पूर्ण टीमको सहकार्यमा विकासलाई द्रुत्ततर गतिमा अघि लाने विचारमा छु ।
शिवसताक्षीको समग्र विकासका चुनौती र समाधानका बारेमा के भन्न चाहानु हुन्छ ?
शिवासताक्षी नगरपालिका एउटा ठूलो विकासको सम्भावना भएको नगर हो । यहाँ जातीय रुपमा मिश्रित समुदायको बशोवास भएकोले सांस्कृतिक रुपमा हाम्रो बलियो समाज छ । एक समुदायको चाडपर्व, रीतिरिवाजलाई अर्को समुदायले स्वीकार गरेर मनाउने प्रचलनको विकास भईसकेको छ । जातिय रुपमा सबै मिलेर बशोवास भएको नगर हो । मिश्रित समुदायको बसोवास भएको क्षेत्रमा विकासले पनि चाँडो फड्को मार्दछ । त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । एकल समुदाय भन्दा मिश्रित समुदाय भएको समाजमा देखासेखिले पनि द्रुत्ततर विकास अघि बढ्दछ । विकसित देशहरु क्रसकल्चर भएरै चाँडो विकसित भएका हुन् ।
यो नगरमा विकासको गतिलाई अघि बढाउन खासै चुनौती छैनन् । झापा यसैपनि धान बढी उत्पादन हुने पहिलो जिल्ला त्यसमाथि बढी धान फल्ने नगर पनि यहि हो । अझ बाँकी रहेका केही खेती हुने स्थानमा सिंचाईंको प्रबन्ध मिलाउन सकियो भने कृषि उत्पादनमा पनि हामी बलियो हुन्छौं । यो नव नगर भएपनि बहुसंख्यक जनता शिक्षित भएको नगरमा पर्दछ । शिक्षामा ख्याति कमाएका बौद्धिक व्यक्तित्व भएको यो क्षेत्रलाई विकासको गोरेटोमा लैजान मैले खासै चुनौती देखेको छैन ।
हो, केही समस्याहरु नभएका होइनन् - छन् । दुई खोला पूर्वमा कन्काई र पश्चिममा कमल खोलाको कटानका समस्या, भूमिविहिन सुकुम्वासीका समस्या, गरिवी, यातायातको सहजता नभएर व्यापारका समस्या, उत्पादित बस्तुले उचित मूल्य नपाउने बजारका समस्या, त्यहाँका यूवा स्वरोजगारीको अभाबमा विदेशीनु परेको छ । यूवाले स्थानीय स्तरमा बसेर गर्न सक्ने उचित र दिगो व्यवसायको भविस्य नदेखेर विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु परेको छ । साविकको शिवगञ्ज गाविसका दुई गाँउ माईपूर्वका लालपानी–टेंग्रालाई पश्चिमसँग जोड्न झोलुङगे पुलको योजना भएको छ । सम्भवत चाँडै काम अघि बढ्छ ।
तल्लो क्षेत्रमा बजारको अभाव छ । सहज यातायातको प्रबन्ध मिलाउन सकेका छैनौ । त्यसैगरि चार साविकका गाविस जोडिएर बनेको नगरमा जनताका आफ्ना आफ्नै भावना, क्षेत्रगत विकासका चाहानालाई मिलाएर लान त्यति सहज नहोला तर पनि मेरो र मेरो टिमको अनवरत प्रयास रहन्छ । त्यसमा सबै क्षेत्र, बर्ग, दलहरु र बुद्धिजिवीको राय सल्लाह र सहयोग लिई अघि बढ्ने मेरो चाहाना छ । जसले हामी सजिलै विकासमा अघि बढ्न सक्छौ । यस्ता स्थानीय समस्यालाई मैले मिहिन रुपमा हेरेको छु जसलाई मेरो बलबुताले भ्याए सम्म स्थानीय बुद्धिजिवी, सरोकार वाला निकाय संग राय सल्लाह लिई गुरुयोजना सहित अघि बढियो भने देखिएका चुनौती समाधान तिर अघि बढ्ने मैले देखेको छु ।
तपाईको विचारमा देश विकास नहुनुमा कारक के हो जस्तो लाग्छ ?
मुख्यत देश विकासका लागि नेतृत्वकर्ताकै मुख्य हात रहन्छ । त्यसैगरि स्थानीय स्तरका सम्भावना र स्थानीय जनताको चाहानालाई विचार गरि योजनालाई अघि बढाउनु पर्छ । नेतृत्वकर्ता मात्र यसको मुख्य दोषि होइनन् । उनीहरुलाई दोष देखाएर हामी पन्छिनु हुँदैन । यहाँ हामी सचेत जनताले पनि आआफ्नो क्षेत्रबाट पहलकदमी लिन नसक्नु हामी भित्रको कमजोरी हो ।
यहाँ इच्छाशक्ति र उचित बजेटको सहि विनियोजन नभएर पनि विकास पछि परेको हुन्छ । क्षेत्रगत रुपमा बजेट विनियोजन र परिवेक्षण नहुँदा पनि विकासले गतिलिन नसकेको हो ।
अन्यत्रित नदिका कारण खेतियोग्य जमिन कटानको ठूलो समस्या छ यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
पहिलो कुरा त ठूला नदी नियन्त्रणका लागि ‘जनताको तटबन्धन’कार्यक्रमले नदी नियन्त्रण गर्दछ । जसमा हाम्रो पहलकदमी रहन्छ । र सानातिना पुलपुलेसा खोल्सा नियन्त्रणका लागि हामी नगरबाटै बजेट छुट्याउछौं । कन्काई र कमल खोला नियन्त्रणका लागि तत्कालिन आपतविपतमा नगरले राहतका कार्यक्रम अघि सार्ने नै छ । र नदी नियन्त्रण सँगै त्यसबाट संभावना देखिने सिंचाईको लागि जनता तटबन्ध लगायतका योजनामा हाम्रो पहल रहने छ ।
शिवसताक्षी नगरलाई विकासमा रुपान्तरित गर्न कस्तो खाका कोर्नु भएको छ ?
हाम्रो नगरलाई कसरी विकासमा अघि बढाउन सकिन्छ ? कस्ता विकासका सम्भाव्तालाई कुन रुपमा लाने भन्ने विषयमा गुरुयोजना सहित अघि बढ्ने हेतुले विशेषज्ञ सहितको राष्ट्रिय टोलीलाई एक पटक हाम्रो नगरमा अवलोकन भ्रमण गराउने योजनामा म छु । पर्यटनका सम्भावना बोकेका दोमुखा, सतासीधाम, त्यसैगरि, सिंचाई र विद्युतका रुपमा हेरिएको कन्काई नदि जस्ता प्राकृतिक कुराले हामी सम्भाव्यताको नजिक छौ र यसलाई दिर्घकालिन विकासको खाका कोर्न सहयोग मिलोस् । कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्दै किसानलाई दिनु पर्ने सुविधा, चन्द्रडाँगीमा रहेको कृषि फर्मको स्तरोन्नतिका लागि गुरुयोजना सहित अघि बढाउने योजनामा छु ।
त्यसैगरि हामी विजयी भइसकेपछिको प्रतिनिधीको पहिलो नगर बैठकले नै शिवसताक्षी नगरपालिकामा रिङरोडको अवधाराणालाई पारित गरिसकेको छ । धरमपुरबाट शुरु भएको रिङरोड तल पाँचगाछीको पुरानो बजार, ओडारी चोक हुँदै बुलोचोक, विष्णुचोक हुँदै भेलामुनी, शिवगञ्ज देखि ब्याङडाँडा भित्रबाट माईधार सम्म जोड्ने निर्णय भइ सकेको छ । तत्कालै हामी त्यो रिङरोडलाई कालोपत्रे गर्न नसकिएता पनि मसिनो रोडालाई ए ग्रेडको रोलर प्रयोग गरेर भएपनि यातायात र सम्पर्कलाई सहज बनाउने योजनामा छौ । त्यसैगरि हाम्रो नगरलाई ‘क्लीन नगर’का रुपमा विकास गर्न विद्यालय स्तरिय सरसफाईका साप्ताहिक कार्यक्रम गर्ने योजनामा छौं । नगरको पहिलो बैठकलेनै अशक्त–असाय, बृद्धबृद्धालाई दशै भत्ता स्वरुप रु ५०० प्रति व्यक्ति सम्मान गर्ने तथा ‘क’ श्रेणीका अपाङगता भएकालाई पनि भत्ता दिने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैगरि गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई दुई थान विद्यालय पोषाक उपलब्ध गराई पहिलो राहतको कार्यक्रम अघि बढेको छ । अहिले तत्काललाई यति नै गरियो र भावी दिनमा कसरी शिवसताक्षी नगरलाई ‘स्मार्ट नगर’ बनाउने भन्ने सवालमा छलफलबाट अघि बढ्ने छौ ।
चुनावी प्रचार प्रसासमा ठूलै रकम खर्च गर्नु भएको सुनियो ? के त्यो साँचो हो ?
विल्कुलै गलत सुन्नुभयो । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता मिचेर कुनै त्यस्तो भड्कीलो प्रचार प्रसार गरेका थिएनौ । आर्थिक रुपमा पनि चुनावमा केही खर्च त भइहाल्छ तर ठूलै रकम खर्च गरेको भन्ने कुरा अनर्गल प्रचार मात्र हो । गरिएका खर्च पनि मितव्ययी रुपमा पार्टीका साथीहरु तथा शुभ चिन्तकले प्रचार सामाग्रीमा सहयोग गर्नु भयो ।